अष्ट्रेलियामा कसरि घुलमिल हुने ? कसरि बनाउने असल साथी ? - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा कसरि घुलमिल हुने ? कसरि बनाउने असल साथी ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २४ पुष २०७५, मंगलवार ०५:३४ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलिया नेपालीसहित विश्वका धेरै मुलुकका विद्यार्थीहरुको हबको रुपमा रहेको छ । त्यसैले यहाँ एउटै कक्षामा पनि विभिन्न भाषा,संस्कृति र वर्गका विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । फरक फरक देश,भाषा र संस्कृतिमा हुर्केर आएका विद्यार्थीहरुबीच शुरुमै घुलमिल हुन गाह्रै पर्छ । तर केही यस्ता उपायहरु छन् जसले विद्यार्थीहरुलाई घुलमिल हुन सहज बनाइदिन्छ । ती उपाय यसप्रकार छन् :
–विभिन्न सहयोगी संस्था, समूह वा कार्यक्रमहरुबाट सही जानकारी लिन र आफ्ना जिज्ञासा मेटाउन सकिन्छ । त्यसको लागि अष्ट्रेलियाका सबै जसो शैक्षिक संस्थाहरुमा ओरेन्टेसन कार्यक्रम, लोकल एडभाइस एण्ड इन्फो, इन्सुरेन्स कन्सलटेसन्स, भिसा असिस्टेंस, ल्याङ्ग्वेज लर्निङ्ग अड्भाइस र करियर काउन्सिलिङ्ग हुन्छन् ।
–अष्ट्रेलियाको कामकाजी भाषा अंग्रेजी हो तर स्थानीय भाषा सिक्दा स्थानीयहरुसँग छिटो घुलमिल हुन सकिन्छ । स्थानीय भाषा सिकाईले धेरै समस्याहरुको समाधानमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । अष्ट्रेलियाली भाषा विभिन्न वेबसाइटहरुबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।
–अष्ट्रेलियाबासीहरु मिजासिला र साथी बन्ने खालका हुन्छन् । संगै पढ्ने तथा काम गर्ने साथीहरुसँग सम्बन्धको हात अगाडि बढाउनुहोस्, त्यसकोलागि बिना हिच्किचाहट उनीहरुका अगाडि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् । स्थानीय तथा विदेशी दुवै विद्यार्थीहरुसँग सम्बन्ध बढाउनुहोस् ।
–युनिभर्सिटीमा विभिन्न क्लबहरु हुन्छन, ती क्लबहरुमा आबद्ध हुनुहोस् । युनिभर्सिटीका क्लबहरुमा सदस्यताको लागि कुनैमा शुल्क लाग्ने हुन्छ भने, कुनैमा शुल्क लाग्दैन । नेपाली समुदायका विभिन्न कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुहोस् ।
–केही समय निकालेर स्वयंसेवामा आफ्नो समय दिन चाहनुहुन्छ भने विभिन्न वेबसाइटहरु मार्फत स्वयंसेवकको माग भएका विभिन्न कार्यक्रमहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंको रिजुम ( जागिरको लागि बायो डाटा) मा राम्रो प्रभाव पार्छ ।
–विभिन्न उत्सव र चाडपर्वहरुको अवसरमा गरिने कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनुहोस् । जसले गर्दा तपाईलाई त्यहाँको संस्कृतिको ज्ञान हुनुको साथै सम्बन्ध विस्तारमा सघाउ पुर्याउँछ ।
Previousमहानगरपालिकाले भत्काइदियाे मापदण्ड मिचेर बनाएको जनप्रतिनिधिको घर
Nextयस्ता व्यक्तिमा पत्थरीको सम्भावना बढी
अष्ट्रेलियामा घरभाडामा बस्दा बुझाउनुपर्ने धितो सम्बन्धि यस्तो छ नियम
२ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०४:५८
उकालो लाग्दै डलरको भाउ, यस्तो छ आजको लागि अष्ट्रेलियन डलरको दर भाउ
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०३:५५
अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्समा ब्युटीपार्लर खुल्ला गर्ने अनुमति , तर यस्तो छ शर्त
१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०६:३७